YEYINTNGE(ကနဒေါ): Sunday, March 09
BY YeYint Nge ... 3/09/20140comment
ကရင်အမျိုးသမီး အဖွဲ့နှစ်ခုက မျိုးစောင့်ဥပဒေ ကို ပယ်ချ
(( The Voice Weekly ))
ဦးသိန်းစိန်က ဥပဒေကြမ်း ရေးဆွဲရန် ညွှန်ကြားထားသည့် မျိုးစောင့်ဥပဒေ ဆိုင်ရာ ကိုးကွယ်ရာဘာသာ ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် လူဦးရေ တိုးပွားနှုန်း ထိန်းညှိခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို အစိုးရက ပြဋ္ဌာန်းခြင်း မပြုရန် ကရင်အမျိုးသမီး အဖွဲ့နှစ်ခုက ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
နိုင်ငံတကာ အမျိုးသမီးများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကရင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး (KWO) နှင့် ကရင်အမျိုးသမီး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (KWEG) တို့က မတ်လ ၈ ရက်နေ့ တွင် ထုတ်ပြန်သည့် ပူးတွဲ ကြေညာချက်တွင် ယင်းသို့ တောင်းဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဥပဒေများမှာ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမျိုးသမီးများ အားလုံးကို ပြက်ရယ်ပြု ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအားလုံး မိမိလက်ထပ်မည့် သူကို ရွေးချယ်ရာ ၌ ကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း၊ ယင်းအတွက် အဆိုပါ ဥပဒေကြမ်းများကို ပယ်ချ ရန် လိုအပ်ကြောင်း ကရင်အမျိုးသမီး အဖွဲ့များက ထည့်သွင်း တောင်းဆို ထားသည်။
သံဃ အဖွဲ့အစည်းကို ဦးစွာ ပထမ ပြုပြင်သင့်
ဆရာတော် Ven Candima
သံဃ အဖွဲ့အစည်းကြီးဟာ အောက်ခြေကနေ ခေါင်အထိ ပျက်စီးချင်တိုင်း ပျက်စီးနေတာတွေ အများကြီးပါ။ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ မသိမမြင်ဘဲ ရဟန်းတော်ချင်းသာ သိမြင်တဲ့ ပျက်စီးမှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ ပြုပြင်စရာတွေကတော့ ရဟန်းတု ရဟန်းယောင်တွေ ပေါများလာတာ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၊ ဈေး၊ ကားဂိတ်၊ ရထား ဘူတာ၊ ကားပေါ်၊ ရထားပေါ်တို့ကို သင်္ကန်းဝတ် အများအပြား အရက်ခိုးတွေ ဝေ့နေတဲ့ မျက်နှာတွေနဲ့ ဓားပြတိုက်သလို ပိုက်ဆံ အလှူခံနေတာ၊ မလှူရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လှူတာ နည်းရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ညစ်ညမ်းစွာ ဆဲဆို ကြိမ်းမောင်း သွား တာ၊ ဘောလုံးပွဲဒိုင်၊ ချဲဒိုင်ခံတာ၊ လူမြင်ကွင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ နေ့လွဲ ညစာတွေ ထိုင်စားတာ၊ အရက်သေစာ သောက်စားနေကြတာ၊ နယ်စပ်က သယ်ဆောင် လာတဲ့ ကားမှောင်ခိုသမားတွေဆီက ခေါက်ကြေး ပိုက်ဆံရ ယူပြီး မှောင်ခိုကားတွေ သယ်ပေး နေကြတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။..........
ဘုန်းတော်ကြီးတွေ အနေနဲ့ သံဃ အဖွဲ့အစည်းကို ဦးစွာ ပထမ ပြုပြင် ပြီးခါမှ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြုပြင်သင့်ပါတယ်.........
BY YeYint Nge ... 3/09/2014 1 comment
((( ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ စစ်တွေမြို့သို့ ကြွရောက်လာမည့် ဆရာတော် ဦးဝီရသူအား ကြိုဆိုမည့် အစီအစဉ် ။ )))
( 10 .3. 2014 ) တနင်္လာနေ့လေကြောင်းခရီးဖြင့် ကြွရောက်လာမည့်ဆရာတော် ဦးဝီရသူအား ရခိုင်စည်တေ
ာ်မင်္ဂလာ (6) ဝိုင်းနှင့်ရခိုင့်ရိုးရာဘာသာရေး ယဉ်ကျေးမှု ရခိုင့်အမျိုးသမီး ဝတ်ရွတ်အဖွဲ့မှလည်းကောင်း ၊ ရခိုင်အမျိုး
သားများအနေဖြင့် ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သော တိုက်ပုံအကျီင်္ ( သို့ ) လည်ကတုံးအကျီင်္များဖြင့် ကြိုဆိုပင့်ဆောင်
ခြင်းအားဖြင့် ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုဖြင့်လည်းကောင်း ၊ ရခိုင်အမျိုးသမီးဟူသမျှ လုံချည်များကိုသာ ဝတ်ဆင်လာ
ကြပါရန်လည်း အထူးလိုအပ်ပါသည် ။
ဆရာတော် ဦးဝီရသူအနေဖြင့်စစ်တွေမြို့ အတုလမာရဇိန်ပြည်လုံးချမ်းသာ ဘုရားကြီးတွင် နှစ်ညတိုင်တိုင်ပင်
အမျိုးသားရေးတရားတော်များဟောကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည် ။ ဆရာတော်အား ကြိုဆိုပင့်ဆောင်ရေးတွင်
လိုက်ပါမည် ဆိုပါက အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း စုရပ်နေရာသို့ လာရောက်နိုင်ကြပါရန် အသိပေးအပ်ပါသည် ။
အချိန် = နေ့လည် ၁၂ နာရီ အရောက်
နေ့ရက် = ၁၀ . ၃ . ၂၀၁၄ တနင်္လာနေ့
နေရာ = အတုလမာရဇိန် ပြည်လုံးချမ်း
သာ ဘုရားကြီး ဗိဗ္မာန်တော် ။
၎င်း စုရပ်နေရာမှတစ်ဆင့် ကြိုဆိုပင့်
ဆောင်မည့် စစ်တွေလေဆိပ်သို့ ကား
ဖြင့် ထွက်ခွါပါမည် ။
Arakan Thu Chay
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင်သမ္မတဦးသိန်းစိန်.တွေဆုံ (၉.၃.၂၀၁၄)
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တို.သည် နေပြည်တော်ရှိ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ လယ်တောအိမ် တွင် ယနေ.ညနေ(၅း၀၀နာရီမှ၅း၅၀နာရီ)အထိ တွေ.ဆုံဆွေးနွေးခဲကြကြောင်းသတင်းရရှိပါသည် ၊ အဆိုပါကိစ္စနှင်.ပါတသက်ရ်ျ ဗဟိုအလုပ်အမှု.ဆောင် ဦးဝင်းမြင်. (တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင်.တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး) ထံသို.မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
သမ္မတအတွက်ချက်ချင်းဆိုသလို National Agenda ဖြစ်သွားတာ ဘာကြောင့်ပါလိမ့် ။ ----------နေလို့လားတောင် ထင်ရလောက်အောင် တက်ကြွမြန်ဆန်လွန်းလို့ပါ။
မျိုးစောင့်ကို ဦးသိန်းစိန်က အပြီး ဆွဲစားလိုက်ပြီ ဆိုတော့ စာဖတ်သူနေသူကြီး ရဲ့ ၂၀၁၅ line-up ကို ဦးသိန်းစိန် ကို ပဲ ပြန်လည်ရွေး ချယ်လိုက်ပြီ ဆုိုတာ သေခြာသလောက်ရှိသွားပါပြီ။ ဒီလောက် ဆို မသီတာထွေး ဖြစ်စဉ်က စလို့ ရခိုင်ပြည်နယ် က နေ နိုင်ငံ အနှံ့ အပြား မှာ ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ တဲ့ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး သွေးခွဲ မှိုင်းတိုက်မှုတွေ၊ အကြမ်းဖက် သွေးချောင်းစီး သတ်ဖြတ်မှုတွေ ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်နဲ့ လက်သည်ကို မြင်လောက်ကြပါပြီ။ မကြာခင်မှာ ကာလ အတော်ကြာ အနားရနေပြီ ဖြစ်တဲ့ စွမ်းအားရှင်တွေ အမျိုးဘာသာကိုစောင့်ရှောက် ဖို့ တာဝန်အသီးသီးပြန်လည်ထမ်းဆောင် ကြတော့မှာပါ။
(( Thiha Thwe ))
ယနေ့ 7Day မျက်နှာဖုံးသတင်း
IGE ၊ တရုတ်နှင့် ထိုင်းကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်းတည်ဆောက်မည့် ဟက်ကြီး ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကိုကန့်ကွက်
East-West Center မှဦးစီးကျင်းပသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မီဒီယာညီလာခံအကြို အဖြစ် "စု"ဖောင်ဒေးရှင်း စတင်ခြင်းအခမ်းအနားနှင့် နေ့လည်စာစားပွဲသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားသည်။
ယင်းအခမ်းအနားသို့ နိုင်ငံတကာမှ မီဒီယာသမားများ၊ အခြားဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ခဲ့ကြသလို၊ "စု"ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မီရှဲလ်ယိုလည်းတက်ရောက်ကာ ဂုဏ်ပြုအမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး၊ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ကြသည့် ဟီလာရီကလင်တန်နှင့် လော်ရာဘုရ်ှတို့ကလည်း "စု"ဖောင်ဒေးရှင်းအတွက် ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူကြောင်း ဗီဒီယို သ၀ဏ်လွှာများပေးပို့ခဲ့ကြသည်။
Written by ဝေမာသိမ့်၊ သိင်္ဂီထွန်း
ရန်ကုန်၊ မဇ္ဈိမ။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တည်ထောင်သည့် စုဖောင်ဒေးရှင်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို စုဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဟောလိဝုဒ် မင်းသမီး မီရှဲယိုးက တက်ရောက် မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
စုဖောင်ဒေးရှင်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့ Co-Oporative Business center (ယခင်ဆရာစံပလာဇာ)ခန်းမတွင် မတ်လ ၉ရက်က ကျင်းပခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီး မီရှဲယိုးတို့ တက်ရောက် မိန့်ခွန်း ပြောခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဟီလရီ ကလင်တန်နှင့် အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဂျော့ဒလယူဘုစ်၏ ကတော် လော်ရာဘုစ်တို့ကလည်း ဗီဒီယိုမိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့သည်။
"စုဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ရိုးရိုးလေးပါ။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ ပညာရေးပါပဲ။ ပညာရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့မှုတွေကို စုဖောင်ဒေးရှင်းက Project by Project (အစီအစဉ်အလိုက်) အခြေခံစီမံကိန်းတစခုချင်း ကိုင်တွယ် လုပ်ဆောင် သွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်"ဟု ဖောင်ဒေးရှင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဟောလိဝုဒ် မင်းသမီး မီရှဲယိုးက သူမ၏ မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်း ပြောသည်။
စုဖောင်ဒေးရှင်း တည်ထောင်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က" နိုင်ငံသားလူထုတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ရာမှာ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပညာရေးက အရေးကြီးတဲ့အခန်းက ပါလာပါတယ်"ဟု ပြောသည်။
စုဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပြန်လည်မြှင့်တင်ရေး၊ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး အဆင့်မြှင့်တင်ရေး၊ ဆေးဝါးထောက်ပံ့ရေးများအတွက် ကြိုးပမ်းရန် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး တွဲဖက်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း ဂျော့ဒလယူဘုစ်၏ ကတော် လော်ရာဘုစ်၊ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း ဟီလရီ ကလင်တန်တို့က တာဝန်ယူထားပြီး ဟောလိဝုဒ် မင်းသမီး မီရှဲယိုးကလည်း ဘုတ်အဖွဲ့အဝင်အဖြစ် ပါဝင်သည်။
စုဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် နှစ်ငါးဆယ်လုံးလုံး လျစ်လျူရှုခံခဲ့ရပြီး အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျနေသည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ပြန်လည် မြှင့်တင်ရန် ငွေကြေးနှင့် ပညာရေးအထောက်အပံ့လိုအပ်နေသည်ဟု မီရှဲယိုက ပြောသည်။
ထို့အပြင် နေ့စဉ် လူနာထောင်ပေါင်းများစွာကို ဆေးကုသနေသည့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတွင် ငှက်ဖျားရောဂါအတွက် ဆေးဝါး လုံလောက်မှု မရှိသလို၊ တီဘီရောဂါ ပျံ့နှံ့မှုသည်လည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဖြစ်ပွားသည့် နှုန်းထက် သုံးဆရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။
'စု' ဖောင် ဒေး ရှင်း
မတ်လ ၉ ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သော စုဖောင် ဒေး ရှင်း ဖွင့် ပွဲ အခမ်းအနားကို စုဖောင်ဒေးရှင်း၏ နာယက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒါ ရိုက် တာ အ ဖွဲ့ ဝင် ဖြစ်သော မီရှယ်လ်ယို တို့ တက် ရောက် ခဲ့ကြပြီး ဂုဏ် ပြု စ ကားများ အသီးသီး ပြော ကြား ခဲ့ ကြပါသည်။ စုဖောင်ဒေးရှင်း၏ ဒါ ရိုက် တာ အ ဖွဲ့ ဝင် များ ဖြစ် ကြ သော ဟီလာရီကလင်တန် နှင့် လော်ရာဘုရ် တို့ မှ လည်း ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက် ကြောင်း ဗွီဒီယို သဝဏ်လွှာ များ အသီးသီး ပေး ပို့ ခဲ့ ကြပါသည်။
ကရင်အမျိုးသမီး အဖွဲ့နှစ်ခုက မျိုးစောင့်ဥပဒေ ကို ပ...